UPDATE: Faah-faahin cusub iyo khasaaraha ka dhashay israsaaseynta caawa ka dhacday Dhuusamareeb | HalQaran.com
UPDATE: Faah-faahin cusub iyo khasaaraha ka dhashay israsaaseynta caawa ka dhacday Dhuusamareeb
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Israsaaseyn khasaaro geysatay oo dhaxeysey Ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda iyo ilaada hoggaanka Ahlusunna ayaa waxaa ay Caawa ka dhacday agagaarka Xarunta Inji ee Magaaladaas.
Israsaaseynta ayaa dhacday, kadib markii uu Dhuusamareeb tegay Wafdi uu hoggaaminayey Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre,waxaana ay ka dambeysay markii ay kala shakiyeen labada Ciidan.
Wariyeyaal ku sugan Dhuusamareeb ayaa waxaa ay soo sheegayaan in israsaaseyntii Caawa ay ku dhaawacmeen laba askari iyo haweeney Shacab ah,Isla markaana xaalada ay haatan tahay mid degan.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu wafdi saraakiil ah u direy Goobta israsaaseynta ka dhacday si loo ogaado sababaha keenay iyo khasaaraha ka dhashay.
ciidamada dowladda iyo Ahlu Sunna
Israsaaseyn khasaaro geysatay